'Biyya galuun ABO nageenya biyyattiif abdii guddaa ta'ullee itti fufuu hin dandeenye' - BBC News Afaan Oromoo
Gaggeessitoota abbootii amantaa gara garaa
Hayyu Dureen ABO Daawud Ibsaa abbootii amantaafi jaarsolii biyyaa walin mari'ataa jiru.
"Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessa jiru hatattamaan akka dhaabbatu barbaanna" kan jedhan bakka bu'aan Yaa'ii Dhaabbilee Amantaa Maggaabii Zarihun Dagguu ABO fi mootummaan taa'anii akka mari'atan barbaadna jedhan.
Kana malees, buqqa'uun namootaafi lubbuun darbuun dhaabbachuu qabas jedhan Maggaabii Zarihun Dagguu.
Kanaaf ammoo hooggantoonni siyaasaa taa'anii mari'achuu akka qabaniifi abbootiin amantaas marii taasifamu irratti deeggarsa akka taasisanis dubbataniiru.
Abbootiin amantaafi jaarsoliin biyyaa kunneen Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa walin mari'achuun isaanii ni yaadatama.
Hayyu Duree ABO Daawud Ibsaafi aanga'oota Addichaa biroo
Barreessaa Olaanaan Yaa'ii Dhaabbilee Amantaa Itoophiyaa Maggaabii Zarihun Dagguu mariin ABO waliin tasifamaa jiru itti fufuusaa dubbatan.
Lubbuun badaa jira, qabeenyi manca'aa jira, uummannis buqqa'aa jira. Kun hattattaamaan akka dhaabbatuuf fi gara nageenya duraaniitti akka deebi'amuuf mari'achaa jirra jedhan.
Biyyatti galuun ABO nageenya biyyattiif abdii guddaa kennee kan ture ta'ullee itti fufuu hin dandeenye.
Kun maaliif ta'e jennee hooggantoota ABO gaafachaa jirra jedhan Maggaabii Zarihun Dagguu.
Marii har'aa malee fulduraattis jaarsolii biyyaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun mariisisuu itti fufna.
Paartileen Oromoo lamaan—ABO fi ODPn walqeequufi quba walitti qabuurraa darbanii sadarkaa walgaarrefachuurra ga'aniiru.
Ibsa kaleessa kennaniin waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa ABO'n karaa nagaa qabsaa'uuf erga biyya galees godinaalee garagaraa keessatti ammoo bifa haaraan loltoota leenjisaa jira jechuun dubbatan.
Hayyu Dureen ABO Daawud Ibsaas ibsa tibba kana kennaniin, ce'umsi kuni karaa nagaa qabeessa ta'een akka milkaa'uufi waliigalteen mootummaa waliin seenne karaa guutuu ta'een akka hojiirra ooluuf mootummaan waraana bobbaase deebisuu qaba jedhan.
Kanaan alattis mootummaan waraana bobbaasuun nageenyi akka hin jiraanne gochuu dhaabuu qaballee jechuun dubbatanii turan.
Dubbiin paartilee Oromoo kana lamaan gidduu jiru hammaachaa deemuun ammoo uummata Oromoo bal'aa hedduu yaaddessaa waan dhufeef hayyoonni, Abbootiin Gadaafi abbootiin amantaa gahee isaanii akka bahauu qabanillee gaafataa jiru.